Nkọwapụta nke gọọmentị nke Oppo A52 apụtawo Gam akporosis
Otu n'ime igwe eji egwu egwu nke oge a bụ OPPO A52, ọnụ nke a na-atụ anya uru dị mma maka ego maka akpa nke ndị ahịa niile na-azụ ahịa.
Ebidobeghị ngwaọrụ ahụ, mana nke ahụ abughi nsogbu ọ bụla maka njirimara na njirimara nkọwapụta nke mkpanaka nke ekwentị iji pụta tupu ya erute n'ahịa ahụ.
Nke a bụ ihe anyị maara banyere Oppo A52
Oppo A52 n'ihu na azụ
Ndepụta ọhụrụ nke China Telecom na-akọ àgwà ndị bụ isi nke ihe nlereanya a. Na ya a kọwara a 6.5-anụ ọhịa perforated ihuenyo na mkpebi na ahu nke bu ihe mejuputara ndia na ibu ha: 162.0 x 75.5 x 8.9 mm na gram 192.
Nkọwapụta isiokwu ahụ kwukwara nke ahụ mobile ikpo okwu Qualcomm Snapdragon 665 ga-eleba anya n’inye ike na ike niile n’ọdụ ụgbọ mmiri a. Cheta na octa-core chipset a na-etu ọnụ maka nhazi isi: 4x Kryo 260 na 2.2 GHz + 4x Kryo 260 na 1.8 GHz. ebe nchekwa nke 612 GB, dị ka China Telecom si kwuo.
Na azụ azụ anyị hụrụ a modulu igwefoto quad nke onye na-eduzi 12 MP na-agba agba, ihe mmetụta 8 MP nke nwere ike ịbụ akụkụ sara mbara na anya abụọ MP 2 ọzọ, nke ga-elekwasị anya na nnukwu na ngalaba blur.
N'aka nke ọzọ, batrị nke Oppo A52 na-etu ọnụ bụ ikike 5,000 mAh na nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa, n'otu oge nke gam akporo 10 sistemụ arụmọrụ bụ nke na-aga na ekwentị mkpanaaka.
Banyere ọnụahịa na nnweta, a na-ekwu na Ọ ga - abata na yuan 1,799, ọnụ ọgụgụ nke ihe dịka euro 234. A ga - enwe nhọrọ agba atọ: Black, Star White na Condensation Purple. A na-atụ anya ka ahapụ ya na Mee 1.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nkọwapụta ọkwa nke Oppo A52 apụtawo tupu ya amalite
[Na vidiyo] Ozi kacha mma nke One UI 2.1 na Galaxy Note 10 + (na ndị ọzọ Galaxy)